मृत्युलोकबाट समृद्ध कांग्रेसी मित्रहरूमा… – Nepal Press
२०७८ असोज १ गते १३:०१
पटनाको त्यस सभामा किसुन जी पनि हुनुहुन्थो । यसको साता नवित्दै विपी पटनाबाट नेपाल फर्किनु भयो । राजा वीरेन्द्रसँग उहाँले तेस्तै वचनबद्धता गर्नुभएको थियो । नेपाल फर्किनुअघि पटनाको सोही “एमएलए क्लब” को सभामा आफू नेपाल फर्किएपछि अवश्य पनि पक्राउ परिने भन्नु हुँदै “आफू जेल परेपछि साथीहरू हाम्रा प्रिय साथी किसुन जी (कृष्ण प्रसाद भट्टराई) बाट निर्देशन पाइ रहनु हुनेछ भन्नु भयो । यतिमात्र भन्नु भयो । पटनाबाट काठमाडौं फर्किन लाग्दा शानेवानीको विमानमा उहाँले “योजनाबद्ध” रूपमा सहयात्री बनाउनु भएको एक सहयोगी, जस्को नेपाल फर्केपछि गिरफ्तार हुने संभावना थिएन; उहाँलाई काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्ने गरी एक खामबन्दी पत्र दिनु भयो । यो पत्र सार्वजनिक गरिएपछि सबैले थाहा पाए विपीले किसुन जीलाई नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति र परशुनारायण चौधरी एवं गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महामन्त्री तोक्नुभएको हो ।
बडो आराधनापछि म जवाफ पाउँछु । मलाई कसैले एउटा शास्वत कुरो भन्छ । त्यो हो…” ठूला र सिद्ध योगीहरूको मृ्त्यु भएपछि योगीलाई पंचतत्वमा विलीन गराइएपछि अन्यन्‌न शिष्यहरूले गुरू योगीको कुटीलाई आगो लगाई भष्म गर्दछन् ।” यस्तो चलन छ । यो कथन म सप्तरीको मेरो वनकुटीमा सुन्दछु । अनि तन्द्रामा सोध्छु किन नि ? कुटी किन जलाउने नि ? जवाफ आउँछ..” हेर त्यस कुटीमा मृत्युपर्यन्त पनि सिद्ध योगीको आत्माको बास रहेको हुन्छ । तसर्थ, नयाँ योगीले कुटी डढाउने गर्छन् पूर्ववर्ती प्रतापी योगीको प्रभावबाट मुक्त हुन् । स्वच्छन्द हुनका लागि ।”
(लेखकको सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत विचारबाट)
प्रकाशित: २०७८ असोज १ गते १३:०१